भिडियोमा हेर्नुहोस् दिनभरका समाचार | Ratopati
भिडियोमा हेर्नुहोस् दिनभरका समाचार
मोहनविक्रम सिंहको भिडियो अन्तर्वार्ता
लामो समय राजनीतिक रुपमा अर्धभूमिगत रहँदै आएका नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवा मानिने सिंह आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनमा भूमिगत र अर्धभूमिगत हुँदै पछिल्लो समय रातोपाटी अनलाईन टिभीमार्फत भिडियोमा सार्वजनिक भएका हुन् ।
यसअघि सिंहको अडियोमात्रै सार्वजनिक हुने गरेको थियो । सिंहले पहिलो भिडियो अन्तरवार्ता रातोपाटीलाई दिएका छन् ।
मंगलबार रातोपाटी अनलाइन टिभीलाई अन्र्तवार्ता दिँदै सिंहले आफू भिडियो अन्तरवार्ताका लागि मात्रै खुला भएको तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अझै नजाने बताए ।
उनले देशको राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त जटिल बन्दै गएको भन्दै यस्तो अवस्थामा पार्टीका विचार र कार्यक्रम जनतामाझ पुर्याउन सहज बनाउन भिडियो अन्तर्वार्ता दिन पार्टीले निर्णय गर्नुपरेको बताए ।
नेता सिंहले तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेबीचको एकतालाई सकारात्मक रुपमा लिएपनि त्यो एकता कम्युनिस्ट पार्टीको एकता नभएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधानको मर्म अनुरुप ल्याउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
संविधानले तीन वटै तहका सरकारको कामहरु परिभाषित गरेपनि कामगर्ने शैलीमा पुरानै आचरण हावी हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधानको स्प्रिट अनुसार आउन नसकेको बताए ।
‘समावेशी विकास र समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था र त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजानेहरुबीच द्वन्द्व हुँदा विकास निर्माणका गतिविधिमा समेत अवरोध भएको बताए ।
त्यस्तै समावेशी आर्थिक विकासका लागि तीन वटै तहका सरकारको संलग्नता र सक्रिय सहभागिताबाट मात्र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन र निरिक्षणमा जानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समावेशी आर्थिक विकासका लागि उत्पादनका साधनहरुमाथि सबैको पहँच समान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
भूमि, पूँजी र प्रविधिको वितरणमा समान पहुँच नभए मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको र त्यसका लागि संघीयता कार्यान्यवनमा आएको स्पस्ट पारेका हुन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको ‘समावेशी विकास र समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रममा उहालेवित्तीय समावेसीकरणमा सरकारले ध्यान दिएको बताए । उनले गाउँगाउँमा समतामुलक विकासका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने र समान रुपले विकास हुने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. स्वर्णीम वाग्लेले समावेशी आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोगहरु बाधक बन्न सक्न बताए ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अस्पतालकै कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा विरामीहरुलाई नीजि अस्पताल पठाउने गरेको पाइएको बताएका छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालको ५८ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्वस्थ्यमन्त्री ढकालले अस्पतालका जिम्मेवार कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक र ट्याक्सी चालकको मिलेमतोमा विरामी नीजि अस्पताल पठाउने गरेको पाइएको बताएका हुन् ।
आस्थाको केन्द्र अस्पताल भएपनि आफै विरामी भयो भने विरामीहरुको हालत स्वभाविक रुपमा निको नहुने भन्दै ढकालले उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा आउने विरामीलाई नीजिमा पठाउने गरिएको बताए ।
मन्त्री ढकालले चिकित्सकहरुको आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्न सकेमात्रै सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार गर्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म ७० हजार बालबालिकालाई ओपीडि सेवा दिएको जनाएको छ ।
ओपीडि तर्फ ७० हजार र आकस्मिकतर्फ २७ हजार बालकालिकालाई सेवा दिइएको अस्पतालले बताएको छ । अस्पतालका निर्देशक डाक्टर आर.पी. बिच्छाले गत आर्थिक वर्षमा ओपीडि तर्फ १ लाख ५५ हजार र आकस्मिकतर्फ ५५ हजार बालबालिकालाई सेवा दिइएको बताउनुभयो । हरेक वर्ष १० देखि १२ प्रतिशत सेवाग्राही बढेको उल्लेख गर्दै बिच्छाले गतवर्ष २ हजार बालबालिकाको शल्यक्रिया गरिएको र १० हजारले अन्तरंग सेवा लिएको बताए ।
कृषकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष
श्रम मन्त्रालयले कृषकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोषको दायरामा ल्याउने योजना अघि सारेको छ ।
मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा कृषक मजदुरलाई श्रमिकको दायरामा ल्याउने योजना मन्त्रालयले अघि सारेका जानकारी दिइएको हो । श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कृषकहरुलाई पेन्सनको सुनिश्चिता गर्न र विमाको दायरामा ल्याउन श्रमिकको दायरामा ल्याउने योजना अघि सारिएको बताए ।
मन्त्री यादवले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको समुन्वयमा ‘रेस्क्यु’ कार्यक्रम अघि सारिएको बताए ।
६० हजारलाई रोजगारी
त्यसैगरी, मन्त्रालयले यो वर्ष ६० हजारलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष ६० हजारलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यो वर्ष ६० हजारलाई रोजगारी दिने योजना रहेको बताएको हो ।
श्रममन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहालले कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएको बताए ।
यी समाचार पनि पढ्नुहाेस्
प्रदेश ३ को राजधानी विवाद : फ्लोर क्रस गर्ने नेकपा सांसदको तयारी, संकटमा सरकार
न्यायाधीशले करोडौँ कुम्ल्याएर राजीनामा दिए उन्मुक्ति पाउने दिन आएकै हो ?
हिँडेरै अस्पताल आएको बिरामीको मृत्युलाई चिकित्सकले कसरी लिन्छ ?
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मत दायाँबायाँ गर्नेको पद धरापमा !
पौडेल निकट जिल्ला सभापतिहरुको भेलाः आए यस्ता सुझाव
भारतमा ४ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला
इरानका सांस्कृतिक धरोहर निशानामा रहेको भन्ने ट्रम्पको धम्कीको सर्वत्र विरोध
टीकापुर घटनापछि छिन्नभिन्न भएका मनहरू
सुलेमानीलाई अमेरिकाले कसरी पार्‍यो निशानामा ?
प्रेस रिभ्यू : कस्तो छ इराकमा नेपालीको अवस्था ?
लगातार उकालोको यात्रा तय गरेको धितोपत्र बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ ।
यस साताको शुरुआतीदेखि नै नेप्सेको उकालो यात्रा जारी नै छ । कारोवार भएको यस साताको तीन कारोवार दिनमा नै नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि कायम छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से १६.२३ विन्दुले बढेर एक हजार २१६.९२ मा पुगेको छ । सेन्सेटिभ परिसूचक ४.१३ ले वृद्धि भई २६४.८१ मा पुगेको छ ।
त्यसैगरी, डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति पाएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मुनाफा र गत वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफा रकम समेतबाट ३० प्रतिशत शेयर लाभांश र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको थियो । संस्थाको साधारणसभाले स्वीकृत गरेको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यही पुस २१ गते स्वीकृति दिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
शुक्रबार अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिएका इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको अन्त्येष्टीका क्रममा भागदौड मच्चिँदा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ ।इरानी मिडियाहरुले उक्त भागदौडमा ३५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् ।
भागदौडमा दर्जनौ व्यक्ति घाइते भएको जनाइएको छ । इरानको केर्मान शहरमा सुलेमानीको अन्त्येष्टी गर्ने क्रममा लाखौं सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो । सुलेमानीको शव केर्मान लैजाने क्रममा सो घटना भएको सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् ।
केर्मान सुलेमानीको गृहनगर समेत हो । त्यही उनको अन्त्येष्टी गरिँदैछ ।अमेरिकाले कमाण्डर सुलेमानीको हत्य गरेपछि उसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
भिडियो समाचार : प्रदेश नम्बर ३ को नाम बागमतीदेखि वैद्य र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता पक्राउसम्म
१३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)को प्रत्यक्ष प्रसारण